बिमान दुर्घटनाको खुल्यो रहस्य : नेपालमा उडान भर्नअघि विमानका पाइलटले राजीनामा गरेका थिए!::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
बिमान दुर्घटनाको खुल्यो रहस्य : नेपालमा उडान भर्नअघि विमानका पाइलटले राजीनामा गरेका थिए!
काठमाडौँ । त्रिभुवन विमानस्थलमा सोमबार दुर्घटनाग्रस्त बनेको युएस बंगला विमानका पाइलट अबिद सुल्तानले नेपालमा उडान भर्नअघि राजीनामा दिएको समाचार बंगादेशको एक अनलाइनले प्रकाशित गरेको छ ।
प्रोथोमालो डटकमको अंग्रेजी संस्करणमा छापिएको उक्त समाचारमा सुल्तानका साथीहरुलाई उद्द्धृत गर्दै सो समाचार प्रकाशित गरेको हो ।
‘नेपालमा उडान भर्न अघि इमेलबाट सुल्तानले युएस बंगलाका अधिकारीहरुलाई राजीनामा पत्र बुझाएका थिए,’ साथीहरुलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ ।
उनको साथीका अनुसार विमान कम्पनीले भने उनको राजीनामा स्वीकृत गरेन ।
पाइलट अबिद सुल्तान र को पाइलट प्रिथुला रसिद दुर्घटनामा मारिएका ५१ जनामध्येका रहेका छन् ।
यता, युएस बंगलाका पब्लिक रिलेसन सेक्सनका प्रबन्ध निर्देशक कामरुल इस्लामले भने पाइलटले राजीनामा पत्र पठाएको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘ यद्यपि, पाइलटले प्लेन उडाउँदिन भने भन्न पाउँछ,’ कामरुलले भने ।
सुल्तानका साथीहरुका अनुसार युएस बंगला एयरलाइन्सका एक उच्च अधिकारीले दुई महिनाअघि कम्पनी छाडेर इथोपिएयन एयरलाइनसमा काम शुरु गरेका थिए । सुल्तानसँग नजिक रहेका उनले अबिदलाई त्यही एयरलाइन्समा जागिर मिलाएका थिए ।
सुल्तानका साथी रहेका अन्य पाइलटहरु राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा पनि विमान उडान भर्न लगाउन नैतिकताविपरित भएको बताउँछन् ।
दुर्घटनाको कारणको बारेमा भने उनीहरुले यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताए ।
सुल्तानले सन् २०१५ को मे ६ मा पाइलटको रुपमा युएस बंगला कम्पनीमा आबद्ध भएका थिए ।
उनी ड्यास–एट क्यु४०० विमानका मुख्य पाइलट थिए । उनी विमानको प्रशिक्षक पनि थिए ।
उनले सन् १९८४ देखि बंगलादेशको बायुसेनामा पनि काम गरेर रिटायर भएका थिए
महासमिति सदस्यहरूको स्वागतका लागि चारतारे झण्डाले रंगियो काठमाडौँ, यसरी हुदैछ कार्य
कम्युनिस्ट नेतृत्वको संसद सचिवालयमा घुस्यो अख्तियार, २ करोड भ्रष्टाचार !
सिंहदरबारमै प्रधानमन्त्री ओलीसामु देशभरका मुख्यमन्त्री अपमानित !
निर्मला प्रकरणमा आईजीपीको जवाफ : अनुसन्धानमा गल्ती भेटे बर्दी खोलिदिनुस्